James Swan oo shaaciyey dhex-dhaxaadin doorashada la xiriirta oo uu wado Lafta-gareen | Xaysimo
Home War James Swan oo shaaciyey dhex-dhaxaadin doorashada la xiriirta oo uu wado Lafta-gareen
James Swan oo shaaciyey dhex-dhaxaadin doorashada la xiriirta oo uu wado Lafta-gareen
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo maanta gaaray magaalada Baydhaba ee gobolka Bay, ayaa shaaciyey qorshe la xiriira doorashada Soomaaliya oo uu wado madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdcasiis Lafta-gareen.
“Cabdicasiis Lafta Gareen waxaan kawadahadalnay xaaladda ballaaran ee siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Arrintaan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku muujiyo sida aan ugu qanacsan nahay dadaalada socda ee madaxweyne C/ Casiis uu isugu keenayo dhinacyada kala duwan si ay uga heshiiyaan wadada loo marayo doorashooyinka,” ayuu yiri James Swan.
“Hadaan nahay Qaramada Midoobey, waxaan ku boorineynaa dhamaan hoggaamiyaasha Soomaaliya in ay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku galayaan wadahadal qaab wadajirka ah, si loo hubiyo in doorashooyinka Qaranka la qabto, iyadoo lagu saleynayo is afgarad ballaaran, oo salka ku haya heshiiskii 17-kii Sebtember, iyo in doorashooyinkaasi ay salka ku hayaan hufnaan , cadaalad iyo ka wada qayb-gal” ayuu hadalkiisa ku sii daray wakiilka Qaramada Midoobey James Swan.
Booqashada Baydhaba iyo waftigan ka socda Qaramada Midoobey ayaa ku soo aadeysa, iyadoo maalin ka hor madaxweyne Lafta Gareen uu gaaray magaaladaas.